အမှတ်တရ မြောက်များစွာနဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလ
‘ဇ’အတွက် အခြေခံ ၇ ခု
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူတွေ အရေအတွက် များစွာရှိပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ “မသန်စွမ်း” ဆိုတဲ့အတိုင်း မသန်မာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိပေမယ့် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေများစွာ ရှိကြသူတွေပါ။ ပညာသင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသူတွေ၊ ဆွံအ နားမကြားသူတွေ၊ မျက်စိမမြင်နိုင်သူတွေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါနဲ့ ခနာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု အားနည်းနေကြသူတွေကို မသန်စွမ်းအဖြစ်...
စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေဆိုတာ ဆောင်းရာသီရဲ့ ရာသီစာတစ်ခုပါပဲ။ ချိုမြမြအရသာရှိပြီး နီရဲရဲ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီသီးကို အသီးလိုက်စားကြသလို၊ သကြားလုံး၊ ဖျော်ရည်၊ ကိတ်မုန့်၊ ယို၊ ရေခဲမုန့်၊ Milkshake စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖန်တီးစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း စတော်ဘယ်ရီရဲ့ အရောင်၊ အနံ့နဲ့ အာနိသင်ကို...
ကမ္ဘာပေါ်က ချစ်စရာအကောင်းဆုံး ကြောင်လေးတွေ
ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ကြောင်ဆယ်လီလေးတွေ အကြောင်း စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. ဂျပန်နိုင်ငံက ကြောင်လေး Maru က သူ့ရဲ့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ခန္ဒာကိုယ်လုံးလုံးလေးက အရမ်း ချစ်စရာကောင်းနေတာမို့ နာမည်ကြီးသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နာမည် Maru ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က မြန်မာလိုဆိုရင် ဝိုင်းလေးလို့ ခေါ်ရမှာပါ။ ၂၀၁၃...
အာလူးကြော်ဆိုရင်တော့ မကြိုက်တဲ့လူ အတော်ကိုရှားမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေတွေ့တဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားစရာအဖြစ် စားလေ့ရှိကြသလို၊ ကော်ဖီနဲ့တွဲဖက်ပြီး အဆာပြေစာအဖြစ် စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တာမို့ အမြဲလိုလို စားဖြစ်ကြတဲ့ စားစရာတစ်ခုပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အာလူးကြော် ရောင်းချမှု ဈေးကွက်က USD ၁၆ သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ၂၀၀၅...
အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေဟာ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အလေ့အကျင့်တွေအပြင် ပြည့်မှီတဲ့အရည်အချင်းတွေ ရှိဖို့ကလည်း အဓိက လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအရည်အသွေးမျိုးတွေက အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဖို့ အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အရည်အချင်းတိုးတက်လာဖို့ အဓိက အခြေခံအုတ်မြစ် ၇ ခုပါပဲ။ ၁. ဖန်တီးနိုင်စွမ်း။ ပြောရရင်တော့ အတွေးအခေါ် အားကောင်းဖို့ပါ။...
ပေါ်လွင်မှုရော နက်ရှိုင်းမှုပါ စုံလင်တဲ့ အိန္ဒိယ
“အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတာ လူသားမျိုးနွယ်စု အစပျိုးရာအရပ်၊ လူသားဘာသာစကားတို့ မွေးဖွားရာ၊ သမိုင်းမိခင်၊ ဂန္ထဝင်တို့ရဲ့အဘွား၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ရဲ့ ဘွားအေကြီးဖြစ်တယ်” လို့ အမေရိကန် စာရေးဆရာ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mark Twain က တင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို တန်ဖိုးအရှိဆုံးသော အရာတွေနဲ့ နှိုင်းပြုခြင်းခံရတဲ့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အပြင်...
မုဒိတာ (တောင်သာ) ဆောင်းရာသီရောက်ပြီဆို မထိခိုက်မိအောင် သတိထား အနာရင်းတတ်တယ်ဆိုသောသတိပေးစကားကို ကျွန်မတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကကြားဖူးခဲ့သည်။ဆောင်းရာသီရောက်သည့်အခါ ကျွန်မတို့၏အသားအရေသည် အရင်ကာလများနှင့်မတူဘဲ ခြောက်သွေ့လာသည်။အနာတစ်ခုခုဖြစ်လာလျှင်လည်း ပျောက်ဖို့ကြာတတ်သည်။ ဆောင်းရာသီသည် အပေါ်ယံအရေပြားကိုခြောက်သွေ့လွယ်သည့်အတွက် အရေပြားတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသောအနာ၊ ဒဏ်ရာတွေအတွက် အနာကျက်ဖို့ကြာနိုင်သည်။အနာကျက်နှေးစေသည့်အကြောင်းများတွင် ကျွန်မတို့ခန္ဓာ ကိုယ်၏သွေးလည်ပတ်မှုနှင့်လည်း များစွာသက်ဆိုင်နေသည်။ရာသီဥတုကလည်းအေး၊လူကလည်း မလှုပ်ရှား ဘဲနေသည့်အခါ ကိုယ်အတွင်းကသွေးလည်ပတ်မှုသည်လည်း နှေးကွေးသွားသည်။သွေးလည်ပတ်မှုနှေးကွေး သွားသည့်အတွက် အနာတဝိုက်တွင် အောက်ဆီဂျင်မရတော့ဘဲ...